Ungayonyusa njani iNtlalwano yeNtlalontle | Martech Zone
Ungayonyusa njani iNtlalwano yeNtlalontle
NgoLwesithathu, Aprili 18, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kutshanje sabelane nge-infographic kunye nenqaku elineenkcukacha ngamanyathelo asibhozo ukuya yazisa ngesicwangciso sakho seendaba zentlalo. Uninzi lwenu sele luqalisile ngesicwangciso-qhinga semidiya yoluntu kodwa nisenokungaboni kuthethathethwano njengoko benilindele. Ezinye zazo zinokucoca ubuchule ngaphakathi kweqonga. I-Facebook, umzekelo, kunokuba uhlawule kakhulu ukukhuthaza umxholo wakho kunokuba ubonakalise ngokuthe ngqo kuye nakubani na olandela uphawu lwakho.
Konke kuqala, ewe, ngokwenza uphawu lwakho lufanele ukulandela.
Kutheni abaThengi belandela iiBrands ezikwi-Intanethi?
umdla - 26% yabathengi bathi uphawu luhambelana nomdla wabo
Ukunikela -25% yabathengi bathi uphawu lubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu okanye iinkonzo
isimo - 21% yabathengi bathi uphawu luhambelana nobuntu babo
izindululo -12% yabathengi bathi uphawu lufanele ukukhuthazwa kubahlobo kunye nosapho
Ukuthwala uxanduva ekuhlaleni -17% yabathengi bathi uphawu luxanduva kwezentlalo
Oko utshilo, ukuba awukuboni ukubandakanyeka okulindeleyo, le infographic evela eBranex, 11 Imidiya yokuncokola Ukuzibandakanya kwiindlela zokunyusa ezisebenzayo, iinkcukacha malunga namaqhinga onokuwasebenzisa:
Yazi abaphulaphuli bakho ojolise kubo -Fumanisa eyona nto ibalulekileyo kubaphulaphuli bakho ngokujonga omnye umxholo ekwabelwana ngawo kwaye wahlomla kwezona zininzi… emva koko usebenzise iindlela ezifanayo. Ndiyakuthanda ukusebenzisa izixhobo ezinje BuzzSumo kwaye Semrush yale. Ubuncinci, unokujonga iziphumo kunye neeforamu, nazo.
Yenza ngokwezifiso iiposti zakho kwiqonga ngalinye leendaba zosasazo Lungiselela ividiyo yakho, imifanekiso, kunye nokubhaliweyo kwiqonga ngalinye. Ndihlala ndimangalisiwe xa ndibona umntu epapasha umfanekiso omkhulu… kuphela ukuwubona unqanyuliwe kwisicelo kuba awuzange ulungiselelwe ukujongwa eqongeni.
Abantu abothusayo - Abathengi bayathanda ukwabelana ngeenkcukacha, ubalo, imikhwa, uphando (kunye nememes) kwimidiya yoluntu, ngakumbi ukuba inomdla okanye inomdla.
Yenza umxholo onentsebenzo ephezulu -Ukunikwa ukhetho phakathi kohlaziyo oluqhubekayo okanye uhlaziyo olumangalisayo, ndingathanda ukuba abasebenzi bam kunye nabaxumi bachithe ixesha elininzi kwaye benze uhlaziyo olumangalisayo olubamba ingqalelo yabaphulaphuli.
Sebenza nabashukumisi boluntu -Abaphembeleli banentembelo kunye nokuzibandakanya kwabaphulaphuli bakho. Ukungena kubo ngokubambisana, ukuthengisa ngokubambisana, kunye nenkxaso-mali inokuqhuba abaphulaphuli bakho kwi-brand yakho.
Nika umnxeba ocacileyo wokuthatha amanyathelo -Ukuba umntu ufumene i-tweet okanye uhlaziyo lwakho lwamva nje, ulindele ukuba benze ntoni ngokulandelayo? Ngaba umisele olo lindelo? Ndiqhubeka ndilumkisa ngokuchasene nokuthengisa nzima ngaphakathi kohlaziyo lwasentlalweni, kodwa ndiyakuthanda ukuhlekisa ngomkhondo ukubuyela kwisithembiso, okanye ukubonelela ngokwenza umnxeba kwiprofayile yam yentlalo.
Fumana elona xesha lilungileyo lokuthumela -Ungamangaliswa yile, kodwa ayisoloko i malunga nokushicilelwa kwakho, imalunga nokuba abantu bacofa-kwaye babelane kakhulu. Qiniseka ukuba uhlala uphambi kwaloo curve. Ukuba, emva kwemini, cofa amaxabiso aphezulu… ke qiniseka ukupapasha emini kwiindawo zabathengi bakho.
Sebenzisa iividiyo ezibukhoma kuFacebook -Eli licebo elinye elingahlawulelwanga ukudlala (okwangoku) kwaye i-Facebook iyaqhubeka nokukhuthaza ngobundlongondlongo. Thatha ithuba loku kwaye uhambe rhoqo ngamaxesha kunye nomxholo othile kubaphulaphuli bakho.
Joyina amaqela afanelekileyo -I-LinkedIn, iFacebook, kunye noGoogle + banamaqela amangalisayo, anomdla kunye nokulandela okukhulu. Shicilela ulwazi lwexabiso okanye uqale ingxoxo enkulu kula maqela ukuze uzibeke njengegunya elithembekileyo.
Yabelana ngomxholo omkhulu -Akunyanzelekanga ukuba ubhale yonke into owabelana ngayo. Njengomzekelo, le infographic ayenzelwanga okanye ipapashwe ndim- yenziwe ngu Branex. Nangona kunjalo, umxholo kunye neengcebiso ezibandakanyiweyo zibaluleke kakhulu kubaphulaphuli bam, ke ndiza kwabelana ngayo! Ayisusi kwigunya lam kolu shishino. Abaphulaphuli bam bayayixabisa into yokuba ndifumanisa kwaye ndifumana umxholo obalulekileyo ngolu hlobo.
Cela impendulo Ukuhambisa abaphulaphuli baye eluntwini kufuna ingxoxo. Ukutshintsha uluntu lube ngabameli kufuna umsebenzi onzima. Buza abaphulaphuli bakho ngengxelo kwaye uyiphendule ngokukhawuleza ukuze ukhulise ukuzibandakanya kwakho kwimidiya yoluntu!
Nantsi infographic epheleleyo evela Branex:
Ayonelanga? Nazi ezinye ezingaphaya Around.io, Iindlela ezingama-33 ezilula zokuKhuthaza ukuBandakanyeka kwiMithombo yeendaba yeNtlalo ngoku.
Ukubuza imibuzo kwizithuba zakho zentlalo zenza ukuba abantu banike izimvo, bandise ukubandakanyeka kwizithuba zakho. Buza imibuzo ethile, echaziweyo endaweni yesandi esivakalayo.
Ii-AMA zisebenze kakuhle kwiReddit nakwi-Twitter. Ngoku, basebenza kakhulu kuFacebook. Yazisa abantu uya kuphendula yonke imibuzo (ngesihloko esithile) kangangeeyure ezimbalwa.
Xa umthengi esebenzisa imveliso yakho kunye nezithuba malunga nayo (uphononongo lombhalo okanye ifoto okanye ividiyo), khuthaza loo mxholo kubalandeli bakho. Ezi ntlobo zezithuba (umxholo owenziwe ngumsebenzisi) zibangela ukubandakanyeka ngakumbi.
nantoni ezihamba unethuba elikhulu lokuthandwa, ekwabelwana ngalo okanye ukuphawula ngalo. Fumanisa ukuba yintoni ehamba kwaye efanelekileyo kubalandeli bakho kwaye wabelane ngazo rhoqo.
Khangela abasebenzisi abasebenzisa hashtags kwaye uphendule kwii-tweets zabo kunye nezithuba: oku kwandisa ukubandakanyeka kwiprofayile yakho xa bejonga iiposti zakho.
kwakhona, khangela amagama aphambili inxulumene nentengiso yakho kwaye ubandakanyeka nabantu usebenzisa la magama aphambili kwizithuba zabo.
Soloko uphendula nakweyiphi na @mention oyifumanayo kwimidiya yoluntu-oku kwenza ukuba abantu bazi ukuba uyakhathala kwaye umamele nto leyo eyonyusa ukubandakanyeka.
I-Curate kunye khuthaza umxholo wabanye abantu kodwa ngenkohliso encinci: soloko umaka umthombo ukuze umthombo wazi ukuba sele ukhankanyiwe. Umxholo ngaphandle kokukhankanywa ufumana ukubandakanyeka okuncinci (ngamanye amaxesha akukho) kunomnye okhankanyiweyo okanye ezimbini.
Thumela into elungileyo eluntwini kwaye yazise abantu ukuba ubakhathalele amaxabiso entlalo. Isisa, uncedo kunye noxanduva kwezentlalo liqhuba ukubandakanya.
Qalisa ukupha okanye ukhuphiswano apho ukuthanda / ukuphawula kuyinxalenye yendyebo / ukhuphiswano. Kwandisa ngokuzenzekelayo ukubandakanyeka.
I-Curate amakhonkco amaninzi / izixhobo kunye nokwabelana ngazo kunye neekhredithi (tag umthombo). Ukukhankanywa okukhulu kuhlala kufumana ukubandakanyeka okuninzi.
Sebenzisa ii-hashtag ezihamba phambili xa ufumana ezinokudityaniswa kwimarike / uphawu lwakho ngandlela thile.
Khangela kunye fumana imibuzo ebuzwa ngabantu (efanelekileyo kwimarike yakho) kwiindawo ezifana ne-Twitter, Quora, Google+ kunye nokunye kwaye uphendule.
Yazisa a ukuthengiswa kwexesha elinomda/ isaphulelo okanye uxelele abalandeli ukuba isitokhwe siyaphela kwimveliso - uloyiko-lokulahleka-luyokunceda ukuba ucofe ngakumbi kwizithuba zakho.
Xa uthumela i-tweet okanye uphendula umyalezo, Sebenzisa ii-GIF zoopopayi. Ii-GIF ziyahlekisa ngokwemvelo kwaye zenza abantu bathande / baphawule ngazo (ukuzibandakanya ngakumbi).
Cela impendulo (Kwimveliso ethile osebenza kuyo) kunye nemibono (yeemveliso ezintsha ezifunwa ngabantu). Kuyamangalisa ukuqaphela ukuba bangaphi abalandeli bakho abanengxelo okanye uluvo (kodwa thula kuba kungekho mntu ubabuzileyo).
Ukuvula ezihlekisayo kwizithuba zakho. Ukuhlekisa ngamanye amaxesha kutsala ukuthanda / izabelo okanye amagqabantshintshi ngamanye amaxesha - konke kukhokelela kuthethathethwano oluninzi kwaye ke, ukufikelela ngakumbi.
Do uphando kunye neepoll (usebenzisa amanqaku okhetho lwendalo kwiindawo ezinjengeFacebook, iTwitter). Nokuba iseti encinci yabantu abathatha inxaxheba kwi-poll iyanceda ukwandisa ukuzibandakanya kwakho kunye nokufikelela ngokulula.
Thatha inxaxheba Iingxoxo ze-Twitter kuba ukuzibandakanya kuhlala kuphezulu ngexesha lengxoxo ye-Twitter ngenxa yezizathu ezahlukeneyo (inani leetweets, ukuthandwa kwe #hashtag, ingxoxo-noluntu njl.
Ufumene ukuhlolwa kwabaxhasi? Yabelana nabo kwiiprofayili zakho zentlalo kunye nokuthega abathengi abakunike uphononongo / ukalisho.
Soloko useta bucala imizuzu embalwa yosuku lwakho ukuze ufumane kwaye landela abantu abafanelekileyo ukusuka kwishishini lakho / kwintengiso. (Kuya kufuneka usebenzise izixhobo ezizenzekelayo ezi)
Bonisa abalandeli bakho ukuba kukho umntu osemva kwesiphatho - ngokusebenzisa ukukhangela iincwadiComment njengabo bonke ubuntu.
Yabelana ngomxholo ofanelekileyo ngexesha iiholide kunye neminye iminyhadala yamaxesha onyaka. Ezi zithuba zihlala zinenqanaba lokuzibandakanya elingcono kunezinye izithuba eziqhelekileyo.
Bonisa umbulelo; enkosi kubalandeli bakho ngamanyathelo abalulekileyo (kwaye ngokubanzi) kwaye abalandeli bakho bazakuzibandakanya nawe.
Fumanisa ukuba yintoni Elona xesha lilungileyo lokuthumela (kuxhomekeke kubalo lwabantu bakho) kwaye uthumele ngala maxesha. Kuya kufuneka wenze ukuba iiposti zakho zifikeleleke kuba zinempembelelo ethe ngqo kuthethathethwano kwiimeko ezininzi.
Ukuba ufuna ukuba abantu bacofe, yitsho ngokucacileyo. Cofa apha ukuze ufumane okungakumbi. ” Izithuba nge Biza-to-isenzo Isicatshulwa senza ngcono ekubandakanyeni abantu.
Buza abalandeli bakho ukubaThega umhlobo”. Uninzi lwabantu luyenza kwaye oko kunyusa kuphela ukufikelela kunye nokuzibandakanya kwisithuba sakho.
Izithuba zentlalo zibonakala zifikelela ngakumbi xa wena ithegi indawo ukuya ku.
Sonke siyazi Iifoto fumana ukubandakanyeka ngakumbi (kokubini kuFacebook nakuTwitter). Kodwa jonga iifoto ezikumgangatho ophezulu xa usabelana ngazo.
kwakhona, Cela abantu ukuba babhale kwakhona okanye wabelane ngokucacileyo. Oku kulandela umgaqo we-CTA.
Ngaba ufumene isixhobo esincedayo? Okanye umntu ukuncedile kwishishini lakho? Banike a khwaza, ubamakishe kwaye wazise abalandeli bakho.
Ukunyusa umnqamlezo iiprofayili zakho zentlalo kwezinye iindlela zentlalo. Unebhodi enkulu yePinterest? Ungalibali ukukhuthaza ibhodi yakho yePinterest kuFacebook okanye kuTwitter (okanye kwezinye iindawo) rhoqo kube kanye.
Sebenzisana kunye iqabane kunye nezinye iimveliso ezithandwayo / amashishini ekwabelaneni ngezithuba okanye ekwenzeni izibonelelo. Ukusebenzisana kukunceda ufikelele kubalandeli abaninzi (kwezinye iimveliso), yonyusa ukuzibandakanya kunye nenani labalandeli onabo.
tags: branexbuzzsumoNxaxhebaFacebookkwenziwa kanjanikwi-infographicinstagramuhlala kwividiyosemrushnxaxheba kwezentlaloTwitter
Umxholo ekuphela kwawo oya kuthi ufune iWindowsPress: Avada
Ukuqonda okukhawulezayo: Uvavanyo lokuQikelela kwangaphambili kwiPosi ngqo